Are We In Love? (2020) နတ်မျက်စိ ​ဗေဒင်စာအုပ်ကို သိကြတယ်မလား.... တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ​မေးခွန်း​တွေကို အမှန်တိုင်း​ဖြေ​ပေးတဲ့ စာအုပ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာ​တွေ​မေးမိမယ်စိတ်ကူးကြလဲ.... ဒီကားက ဆိုး​ဂျောင်ဆိုတဲ့ ​ကောင်မ​လေးက အူတူတူ​လေး သူ့​ဘော့စ်ဆွန်း​ဂျေး က ကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်... တစ်​နေ့ ဆိုး​ဂျောင်က ​ဘော့စ်အပြစ်​ပေးလို့ညနက်တဲ့ထိ အလုပ်လုပ်ရင်း အဖွားအိုတစ်​ယောက်ကဆိုင်ကိုလာပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်​ပေးသွားတယ် အဲ့စာအုပ်​လေးရပြီး​နောက်ပိုင်းဆိုး​ဂျောင်းအချစ်​ရေးက ဂျွမ်းထိုး​မှောက်ခုန်ဖြစ်သွားတယ် ​ဘော့စ်အူတိုတဲ့ အခန်း​လေး​တွေဆို အူယားစရာတအား​ကောင်းလွန်းပါတယ် ​ပေါကားလုံးဝမဟုတ်တာ​တော့ အာမခံပါတယ် ဒီကား​လေးကြည့်ပြီး အချစ်စစ်ကိုရှာ​ဖွေတတ်ကြပါ​စေလို့ File Size - 1.1 GB Quality - Web-Dl 1080P Subtitle - Burmese (Hardsub) Translator - Dolly Encoder - Thit San Khant
IMDB: 7.3/10 1,656 votes
The Teacher’s Diary (2014) Teacher's Diary(2014)အချစ်ဆိုတာ ဒီလိုဖြစ်တယ် ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ခုတ်တရပြောကြ၊ငြင်းကြရလောက်တဲ့အထိ ဝေခွဲမရနိုင်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ထားတယ်မလား။အမှန်တော့ အချစ်ထက်ဆန်းကြယ်ပြီး အချစ်ကိုတောင်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့အရာဟာ "ဖူးစာ"ပါ။လူသားနှစ်ယောက်ဟာအမှတ်တမဲ့ကိစ္စလေးတွေကနေ ဘဝခရီးတစ်ခုကိုအတူတူလျှောက်လှမ်းဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်ဆိုရင် အချစ်ထက်ပိုစွမ်းအားကြီးတဲ့ "ဖူးစာ" ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကြောင့်ဆိုတာကို သံသယမရှိပါနဲ့။ဒီလိုပေါ့ပါ့ပါးပါးကြည်နူးစရာဖြစ်ရပ်လေးတွေကို လေးလံတဲ့လူသားဒုက္ခတွေကြားမှာအကောင်းဆုံး ပုံဖော်ပြသသွားခဲ့တာ Teacher's Diary ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမှာပါ။Song ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ခက်ခဲတဲ့ဘဝပေးအခြေအနေတစ်ခုမှာ ဘာအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်စပြီးရင် ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်လူငယ်လေးတစ်ယောက်။သူ ရေပေါ်ကျောင်းကိုစရောက်တော့ ထွက်ပြေးချင်လောက်အောင်အဲ့ကျောင်းမှာလိုအပ်ချက်အရမ်းများတယ်။ဒါပေမယ့် သူကံကောင်းသွားတာက သူ့အရင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Ann ဆိုတဲ့ဆရာမလေးရေးထားတဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးကြောင့်ပါ။Ann ဟာသူကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းတင်ရေးထားခဲ့တယ်။ဒါတွေကိုဖတ်ပြီး Song တစ်ယောက်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အားအင်နဲ့နည်းလမ်းတွေရခဲ့တယ်။Ann ရေးခဲ့တဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတဲ့နောက် Ann မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ရေပေါ်ကျောင်းလေးနဲ့ ကလေးတွေကိုပါ Song တစ်ယောက်ချစ်ခင်တတ်ခဲ့ပြီ။Ann ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း ချမ်းမြေ့ခြင်း အထီးကျန်ခြင်း ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကိုသိရှိခံစားပြီးတဲ့နောက် Song ဟာ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ပိုင်ရှင် Ann ကိုအရမ်းတွေ့ချင်လာတယ်။Ann တစ်ယောက်သံယောဇဉ်ကြောင့်ကျောင်းလေးကိုပြန်လာတော့ သူ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးမှာသူမရှိတုန်း သူမသိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပျက်သွားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရပ်တွေကို ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ထားတဲ့ Song ဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာလေးမှာလည်းရေပေါ်ကျောင်းနဲ့ကလေးတွေကို သူ့လိုပဲချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုတာသိရှိပြီးနောက် Ann ဟာလည်း ...
App War (2018) [Unicode]Start-Up ဆိုတဲ့ စကားလေးက ယနေခေတ် လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာပါတယ်...လူငယ်တော်တော်များများက သူတိုက အလုပ်တွေကနေ ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွေ start-up လုပ်ကြပါတယ် ။အဲ့ထဲမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျရှုံးပြီး ၈ ရာခိုင်နှုန်းက ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ရပါတယ် ၂ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ကသာ အောင်မြင်ကြတာပါ လူငယ်အချို့ဟာ အောင်မြင်မယ့် ၂ ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ သူတို့တွေပါမယ်လို့ အတိကျ မပြောနိုင်ပေမယ့်လည်း ဒီလိုစွန့်စားမှုမျိုးတွေကို လုပ်ကြပါတယ်...ဒီတစ်ခါတော့ အဲ့လိုစွန့်စားပြီး start-up လုပ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Movie လေးတစ်ခုကို CM fan တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ---------------------- Bom ဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ start-up ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ပြိုင်လေ့ရှိပါတယ် ၊ ပြိုင်ပွဲမှာ အခြားအဖွဲ့က အနိုင်ရသွားပြီး သူတို့ရဲ့ App ကို ရွေးချယ်မခံခဲ့ရတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေခဲ့ပါတယ် June ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း Bom ...
IMDB: 6.6/10 522 votes
Straight Up(2019) Straight Up(2019)ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို မသွားခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။ သင်ဟာ LGBT တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။ သင့်ရဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာ Gay% Straight% ဘယ်လောက်စီရှိမယ်ထင်လဲ။ လုံးဝ Straight ပါလို့ အာမခံလား။ အဲဒါဆို တခါတလေ ယောက်ျားလေးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ပုခုံးပေါ် ဒါမှမဟုတ် ပေါင်ပေါ်ကို ရုတ်တရတ် လက်အတင်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားဖူးလဲ။ သောက်ရင်းစားရင်း မူးမူးနဲ့ ဘော်ဒါအချင်းချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားဝိုင်းက လိင်တူတစ်ယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် နမ်းမိသွားတာမျိုး အဲ့ဒီလို အလားတူကိစ္စမျိုး အဲ့ထက်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စမျိုးရှိခဲ့ဖူးလား။ နောက်နေ့မနက်မှာ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို ပြန်အမှတ်ရမိရင်း ငါများ Gay သွားပြီလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်ပေါ်ဖူးကြတယ်မလား။ ဒါမှမဟုတ် မိမိက Gay ပါလို့ ဝိုင်းသမုတ်ကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်ရင် မသိစိတ်ထဲက အနည်းငယ်သော Gay % က တိုးပွားပေါက်ကွဲထွက်လာပြီး လုံးဝ Gay သွားမယ်လို့ထင်မိလား။ တွန်းရော ...
Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) IMDb 8.1/10"ပြဿနာမရှိပါဘူး မိန်းမလှလေးနိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဒီလိုအသေးအမွှားလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်"ဒီဇာတ်ကားရဲ့နာမည်မြင်ရုံနဲ့ ဘောလီဝုဒ်ပရိသတ်တင်မကဘဲ ရုပ်ရှင်ချစ်သူအားလုံး ဒီကားကိုကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဇာတ်ကားမကြည့်ဖူးရင်တောင် ဒီဇာတ်ကားထဲကဇာတ်ဝင်တေးတွေကိုတော့ နားရေဝနေလောက်ရောပေါ့အခုချိန်ထိ ဒီဇာတ်ကားထဲက သံစဉ်တွေကို ဖုန်းရင်းတုန်းထားတဲ့သူတွေ တပုံကြီးပဲဗျာဒီဇာတ်ကားရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ ရ,ထားတဲ့ဆုတွေက ဘောလီဝုဒ်မှာ စံချိန်တင်ပဲယနေ့အချိန်ထိ DDLJ ကို ရုံတင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ အိန္ဒိယမှာရှိသေးတယ်ဆိုပဲထွက်နေသမျှ ဘောလီဝုဒ်အချစ်ကားတွေမှားလည်း ဒီကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ဒီဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်တေးတွေ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ပြန်လည်ဂုဏ်ပြုထည့်သွင်းလေ့ရှိနေကျပဲဒီတော့ ဒီကားကို ကျွန်တော်မညွှန်းခင် အားလုံးသိပြီးကြလောက်မှာပါKing Khan ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကားလို့လည်း ဆိုလို့ရသလိုSRK ကို Romance King ဖြစ်စေခဲ့တာ ဒီလိုဇာတ်ကားတွေကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူးအခု ဒီဇာတ်ကားကို ရုပ်သံအရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ ဘောလီဝုဒ်ပရိသတ်ကြီး ပြန်လည်ခံစားလို့ရလေအောင် ကျွန်တော်များ Channel Myanmar Team မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဇာတ်လမ်းလေးညွှန်းဆိုရ,ရင်ရာဂျ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးလေးနဲ့ ဆင်မ်ရန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ ဥရောပခရီးစဉ်တစ်ခုမှာတွေ့ပြီး သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ စင်မ်ရန်းဟာ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ စေ့စပ်ပြီးသားပါဒီတော့ ...
IMDB: 8.1/10 60,968 votes
Valley Girl(2020) Valley Girl(2020) ဒီဇာတ်ကားလေးက Musical Romantic Comedy ဇာတ်ကားအမျိုးအစားလေးပါ။ အရမ်း Sweet ဖြစ်ပြီးတော့ ရိုထားတဲ့ ကားလေးပါ။ရယ်လည်းရယ်ရသလို တစ်ကားလုံးလဲ သီချင်းလေးတွေနဲ့ တကယ် နားထောင်ပြီး ကြည့်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။တောင်ကြားမြို့လေးထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေက ဖက်ရှင်ဆိုလဲဆင်တူ ဝတ်ကြတယ်။ဘဝကို ပျော်ပျော်ပဲဖြတ်သန်းကြပေမယ့် အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့အထက်တန်းစားယောက်ကျားမှဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ အဲ့ထဲမှာမှ ဂျူလီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက တစ်မူထူးခြားတယ်။ရှေးရိုးစွဲ မဆန်ချင်ဘူး ...အချစ်ကိုကိုးကွယ်သလို ဘယ်လိုအတန်းအစားပဲနေနေ ချစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အသင့်ပဲဆိုပါတော့...။ အဲ့ဒီလို ကောင်မလေးနဲ့ မိဘမရှိ တေလွင့်နေတဲ့ရမ်ဒမ် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတို့ ကမ်းခြေမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်...မတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က မွေးဖွားခဲ့ကြသလိုအယူအဆတွေလည်း ကိုယ်စီကွဲပြားကြလေတော့ ရေရှည်မှာ အချစ်ကိုအရင်းတည်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဟန်ချက်ညီစွာလျှောက်လမ်းဖို့ အတော်ခက်တယ်ပြောရမယ်....ကိုင်းသူတို့ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ကြပါနော်....ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Theint Theint ပဲဖြစ်ပါတယ်....File Size : (950 MB) and (310 MB) Quality : WEB-DL ...
Mr. Hurt (2017) Mr. Hurt (သို့) နာကျင်နေသော ချိဖI Fine..Thank You..Love You,Heart Attack ဇာတ်ကားတွေထဲက နာမည်ကြီးမင်းသား Sunny ရဲ့ နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ဒီဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကို သူ့ရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သိပ်သည်းအောင် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ နာကျင်နေသောချိဖ တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။အစွဲအလမ်းကြီးသလို ဒေါသလဲကြီးတတ်တဲ့ နာကျင်နေသောချိဖ ဒွန်စီချန်။(သူဟာယောင်္ကျားလေးအများစုရဲ့ သဘာဝကိုကိုယ်စားပြုသွားပါတယ်။)ခေါင်းနည်းနည်းလွတ်နေပေမယ့် ရုပ်ဖြောင့် ပိုက်ဆံရှိလို့ အဆိုတော်ဖြစ်လာပုံရတဲ့ ဂျင်မီ။နှလုံးသားထက် အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကို မက်တွယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မော်ဒယ် အန်နာ။ (သူကလဲ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ သဘာဝကို ကိုယ်စားပြုသွားပါတယ်။)ကြင်နာတတ်တဲ့ မိခင်စိတ်မျိုးနဲ့ ရောဂါသည်မလေး ဒီယူ။ဒီဇာတ်ကောင်လေးယောက်ကို အခြေပြုလို့ ချစ်ခြင်းရဲ့နာကျင်မှုတွေအကြောင်းကို ပြသထားပါတယ်....။အပြင်မှာလိုပါပဲ...ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ နှလုံးသားခပ်များများ ဦးနှောက်ခပ်နည်းနည်းနဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ နစ်မြုပ်နေတတ်ကြပြီးမိန်းကလေးတွေကတော့ နှလုံးသားခပ်နည်းနည်း ဦးနှောက်ခပ်များများနဲ့ ချစ်ခြင်းကို စီမံတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ...တကယ်ချစ်ရသူကတော့ အမြဲတမ်း နာကျင်ရတာပါပဲ။ခံစားနာကျင်ပေးကြပါဦး။( မင်းသား Sunny ရဲ့ ဇာတ်ကားအားလုံးကို ဒီမှာ https://channelmyanmar.org/category/sunny/ ကြည့်လို့ရပါတယ်။-Zawgyi- Mr. Hurt ...
Shambala (2012) မင်းသား Sunny နဲ့ Shutter ဇာတ်ကားထဲမင်းသား Ananda Everingham နဲ့ညီအစ်ကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Shambhala ဟာ ထိုင်းရုပ်ရှင်လောကမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့ညီအစ်ကို ၂ယောက် တိဗက်ကိုခရီးထွက်ရင်းနားလည်မှုရလာတာကိုတင်ဆက်ထားတယ်။ရယ်ရတဲ့ road trip ဇာတ်လမ်းမှာ ညီအစ်ကို ၂ယောက်ကြားကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ dramedy ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးတိဗက်ရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုလည်းမြင်ရဦးမှာပါ။(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Myanmore Plus မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။) ( မင်းသား Sunny ရဲ့ ဇာတ်ကားအားလုံးကို ဒီမှာ https://channelmyanmar.org/category/sunny/ ကြည့်လို့ရပါတယ်။) File size…(1.1 GB) Quality….DVD-Rip Format…mp4 Duration….01:53:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Mann MawKunn
Seven Something ( 2012 ) 2012 က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Seven Something ဇာတ်ကားလေးဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး Top 20 List ထဲမှာဝင်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါထိုင်းတို့ Ro ပြီဆိုရင် အသေကြွေတယ်မလား..ဒီဇာတ်ကားလေးဟာလည်းအချစ်ဇာတ်လမ်းလေး သုံးခုကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ ဗီဒီယိုရိုက်တာအရမ်းဝါသနာပါတဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်ချင်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်.သေချာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့Social Media ( Facebook , twitter , instagram ) တွေကိုဘဝမှတ်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဒုတိယကတော့ ကျော်ကြားမှုကိုမက်မောတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့အဏ္ဏဝါ ပြတိုက်ကရေငုတ်သမားလေးတစ်ယောက်..သူတို့တွေချစ်ခဲ့ကြပေမယ့် မိန်းကလေးက ကျော်ကြားမှုကိုအလွန်အမင်းပဲမက်မောလွန်းတာကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်..ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ရမယ့်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတတိယတစ်ခုကတော့.. ခင်ပွန်းသည်ဆုံးပါးသွားတဲ့အသက်၄၀ကျော်မမကြီးနဲ့ ၂၀ ကျော် အက်စမာရောဂါကြောင့်မာရသွန်ပြေးတဲ့ကောင်လေးတို့ဇာတ်လမ်းလေး..ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်မဖြစ်သင့်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ပြီးဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ..အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ( မင်းသား Sunny ရဲ့ ဇာတ်ကားအားလုံးကို ဒီမှာ https://channelmyanmar.org/category/sunny/ ကြည့်လို့ရပါတယ်။) - Zawgyi-2012 က ထြက္ရွိခဲ႔တဲ႔ Seven Something ဇာတ္ကားေလးဟာထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆံုး Top 20 List ထဲမွာ၀င္တဲ႔ဇာတ္ကားေလးပါထိုင္းတို႔ Ro ၿပီဆုိရင္ အေသေၾကြတယ္မလား..ဒီဇာတ္ကားေလးဟာလည္းအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလး သံုးခုကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္ ပထမဆံုးကေတာ႔ ဗီဒီယိုရိုက္တာအရမ္း၀ါသနာပါတဲ႔ ...
IMDB: 6.9/10 434 votes
The Bedside Detective (2007) IMDb Rating (6.5) ရရှိထားတဲ့ ထိုင်းဟာသဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့ဆိုတဲ့ ငနဲလေးဟာ စွန့်စားတီထွင်ရတာကို ကြိုက်တတ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ...သူဟာ...တီဗွီပန်ကာ...နေရောင်ခြည်နဲ့ကင်စားရတဲ့ ဘာဘီကျူးဆိုင် စတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ကူးပေါက်သလိုလုပ်ပြီးလုပ်တိုင်းမှာ သောက်တလွဲဖြစ်သွားတတ်ပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ကတော့ လုံးဝမကျပါဘူး....ဒါပေမယ့် အကြွေးတွေ ဖိစီးလာတဲ့အခါမှာတော့ ပိုက်ဆံရမယ့် စွန့်စွန့်စားစား အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်....ဒါကတော့ ကြာကူလီဇာတ်လမ်းအရှုပ်တွေကို ဖော်ထုတ်ရမယ့် စုံထောက်လုပ်ငန်းပါ။အဲ့ဇာတ်လမ်းအရှုပ်တွေထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်းကြွေသွားမိတဲ့အခါမှာတော့....မောင်ဂျော့တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ စွန့်စားမလဲဆိုတာ.........။မင်းသားကတော့ I fine thank you,love you ...Heard Attack ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသား Sunny Suwanmethanont...မင်းသမီးက ချစ်စဖွယ်မျက်နှာပေးလေးနဲ့ Pattarasaya Kreuasuwansri...တကယ်ကောင်းတဲ့ ထိုင်းဟာသဇာတ်ကားလေးတွေက Entertainment ဖြစ်တာ အသေအချာမို့ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။( မင်းသား Sunny ရဲ့ ဇာတ်ကားအားလုံးကို ဒီမှာ https://channelmyanmar.org/category/sunny/ ကြည့်လို့ရပါတယ်။)- Zawgyi -IMDb Rating (6.5) ရရွိထားတဲ့ ...
Dear Dakanda (2005) မင်းသား Sunny ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပဲ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။Drama/Romance အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDb Rating (7.8) ရရှိထားပါတယ်။မဖွင့်ပြောဘဲ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချစ်တွေအကြောင်းကို ခံစားတင်ပြထားတာပါ။( မင်းသား Sunny ရဲ့ ဇာတ်ကားအားလုံးကို ဒီမှာ https://channelmyanmar.org/category/sunny/ ကြည့်လို့ရပါတယ်။) File size…(2 GB) and (1.3 GB) Quality….WEB-DL 1080p 5.1 & 720p Format…mp4 Duration….02:07:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Thai Series Fan Page
Rich in Love (2020) CM Fan တွေအတွက် ပေါ်တူဂီ ရုပ်ရှင်ကားသစ် တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်... ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယို မြို့ ရဲ့ နောက်ခံ အလှ နဲ့ အရမ်းလှပတဲ့ အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တစ်ခုအကြောင်းပေါ့... အချစ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဆိုတာ ယုံလား ? တက်ကို ဆိုတဲ့ သူဌေးလေးဟာ သူ့အဖေက အရမ်းချမ်းသာလွန်းလို့ ဘော့ကျော့နေပြီး တစ်မြို့လုံးက ကောင်မလေးတွေ နဲ့ ပတ်ပြီး အိပ်နေတာပေါ့ ရီယို နဲ့ နီးတဲ့ တောင်ယာစိုက်ခင်းတွေ ရှိတဲ့ဘက်က ခရမ်းချဉ်သီးမင်းသားလေး လို့ နာမည် တွင်တယ် တစ်မြို့လုံးက အရွယ်ရောက်ပြီး ကောင်မလေးတိုင်း ဟာ တက်ကို လို နာမည်ကြီး ရုပ်ချော သူဌေးသားလေး နဲ့ စုံတွဲခုတ်ချင်ကြတာပါ အဲ့ဒီ တစ်ဖက်က ရီယိုမြို့မှာတော့ ဆေးကျောင်းသူလေး ပေါ်လာ ဟာ ဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ အလုပ်သင်ဆရာဝန် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း နဲ့ တစ်ရက်မှာ ပေါ်လာ ရဲ့ သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ခရမ်းချဉ်သီးမြို့ကို ရောက်လာပါတယ်... ကံဆိုးစွာပဲ အဲ့ဒီနေ့မှာ မတော်တဆ မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူဌေးသားလေး တက်ကို နဲ့ ဆရာဝန်လောင်းမလေး ပေါ်လာ တို့ ဆုံမိကြတာပဲ... ပေါ်လာ ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်သွားတဲ့ ...
IMDB: 7.3/10 181,528 votes
50 First Dates(2004) 50 First Dates(2004)သစ္စာနီကပြောတယ် အချစ်ဆိုတာ ဆပ်ပြာဖူဖောင်းတဲ့ တာရာမင်းဝေကတော့ အချစ်ဆိုတာ မသိစိတ်ရဲ့တည်ရှိခြင်းနဲ့ ဖြစ်ခြင်းကြားက လျှို့ဝှက်သောဆုံမှတ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ကတော့ အချစ်စစ်ဆိုတာ တစ်သက်မှာတစ်ခါပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းရဲ့သစ္စာတရားနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတယ် အချစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတော့တစ်ချို့ကပြောကြတယ် ဟန်ဆောင်မှုတွေကျော်လွန်ပြီး သတ္တိတွေရဲ့အလွန်ကိုတွန်းပို့ခြင်းခံရတဲ့လုပ်ရပ်တဲ့ ရူးသွပ်မိုက်မဲခြင်းလို့လည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းခေါင်းစဉ်တပ်ကြတာလည်းရှိတယ်....ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ မိုက်မဲခြင်းရူးသွပ်ခြင်းတွေမြောက်များစွာ လုပ်ခဲ့ကြတယ် ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကြားမှာ အချစ်ကြောင့်ရူးသွပ်သွားတာကတော့ အရမ်းချိုမြိန်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းပါတယ် .....ဘာလို့ဆိုနှလုံးသားရဲ့လိုအပ် ချက် အချစ်ကိုတခြားအရာတွေက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာမှမဟုတ်တာ......... ငါးပြတိုက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူရွယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်...တစ်နေ့စားသောက်ဆိုင်မှာထိုင်နေရင်း မုန်တွေ့နဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ မိတယ်....အဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်တော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီး ချဉ်းကပ်မိတယ်.....သူအောင်မြင်ပါတယ်...နောက်နေ့ဒီလိုအချိန်တွေ့ဖို့ကောင်မလေး ကတောင်ပြန်ချိန်းသွားတယ်....နောက်တစ်နေ့မှာ ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တော့ သူနှုတ်ဆက်မိတယ်...ထူးဆန်းတာက ကောင်မလေးရဲ့တုန့်ပြန်မှုပဲ... ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်ရင်း ဘာတွေလာကြောင်နေတာလဲဆိုတဲ့ခွန်းတုံပြန်မှုကြောင့် သူဆွံအသွားတယ်.... နောက်မှသိလိုက်ရတာက ကောင်မလေးဟာ ကားမတော်တဆမှုကြောင့် ခပ်ဆန်းဆန်းအတိတ်မေ့ရောဂါရနေတာပါပဲ..... ကျွန်တော်ပြောတဲ့ သတ္တိတွေရဲ့အလွန် ရူးသွပ်မိုက်မဲခြင်းဆိုတာ အဲ့ဒီမှ စတာပဲ...ဆက်ပြောရင် ပေါ့သွားမှာစိုးရိမ်လို့ ဒီတင်ပဲနားပါရစေ.... " ခင်ဗျား တို့ ကျွန်တော့ကိုရူးတယ်ပဲပြောပြော မိုက်မဲလွန်းတယ်ပြောပြောရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပျော်တယ် ကျွန်တော့ဘဝဟာ သူမပါ.... အားလုံးအတွက်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်...နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ကျွန်တော့ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေမိတယ်ဆိုရင် သေချာတယ် ခင်ဗျားဟာ အချစ်ကိုမကြုံဖူးသေးသလို ကျွန်တော့လိုအချစ်စစ်တစ်ခုနဲ့မချစ်ဖူးသေးလို့ပါပဲ...." ဒီကားလေးပြီးတော့ လူရွယ်က ကျွန်တော်တို့ကို အသံတိတ် ဒီစကားလေးပြောသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မိတယ်File Size…(850MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:39:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder… ...
IMDB: 6.8/10 284,598 votes